Fitafy vehivavy mitaingina rongony sy loha, manga, jacket na jirobe
Fitafy vehivavy miaraka amin'ny akanjo - lamaody moda ho an'ny fotoana rehetra
Ny akanjom-behivavy misy akanjo dia akanjo mast-hev ny fashionista rehetra. Amin'ny lafiny hafa inona no ahafahanao mijery vehivavy, manintona ary mahafinaritra? Tsy ilaina ny manao izany amin'ny kiraro eo amin'ny valan-jazakely, izay avy eo amin'ny faran'ny andro dia miverimberina, ary miverimberina ny lamosina. Ny trano fonenana dia nanome tsipika mahazendana sy tena mahomby.
Models ho an'ny vehivavy amin'ny akanjo
Ny akanjom-behivavy misy akanjo tsy akanjo dia tsy marefo amin'ny fomba malaza, ny lamosina misy loko misy pensilihazo, ary izany rehetra izany dia iray amin'ny loko maivana. Tsia, mety ho akanjo lava lava lava amin'ny tany izany, misy lantom-pantatra be, akanjom-behivavy misy baolina lava be, miaraka amin'ny akanjom-boninahitra na loko. Amin'ny vanim-potoana rehetra eo amin'ny tontolo lamaody, ny fironana taloha dia mamelombelona, ​​misy zavatra vaovao miseho izay afaka mamadika ny hevitrao amin'ny loha-tongotra na amin'ny tongotra mifanohitra.
Ao amin'ny tendrony fanta-daza, ireto manaraka ireto ny akanjo misy ny akanjo misy akanjo:
jirama tsy misy fehin-kiraro tsy misy firavaka miaraka amin'ny miniskirt;
jaketa, sahala amin'ny hadalana, misy jiro pensily mamiratra mamirapiratra;
Volo madinidra, nopetahana tamin'ny loko mamirapiratra miaraka amina rantsana mafy;
Ambony amin'ny baskety sy bolo-akanjo;
midi lava miaraka amin'ny tendron-pandrefesana efa tafahoatra ary fehin-jirofo fohy;
ny faran'ny lalan-dàlana mahitsy ary ny tampony ambony;
jaketa iray ao amin'ny style Chanel sy ny ambany elanelana, voaravaka amin'ny banga matevina.
Ny akanjo vita amin'ny vehivavy miaraka amin'ny akanjo
Ny akanjo vita amin'ny akanjo dia akanjo marevaka izay afaka manavaka ny akanjo ataonao eo amin'ireo olon-kafa an'arivony. Jereo ny famoronana ny talenta Cristiano Burani, Alexander Wang na Eudon Choi, mba hahazoana toky indray fa ny akanjo misy akanjo amin'ny akanjony dia tsy afaka mibanjina raha noforonina avy amina mpamorona mamirapiratra. Ankoatra ny loko, ny tombontsoa goavan'ity akanjo ity dia singa sy fitaovana mahazatra. Ny zavatra mitafy tsy manjary tsy manjary, mipetaka tsara izy ireo ary tsy miteraka fihetsika mandritra ny fandehanana. Ny antonony lehibe iray toy izany dia ny hoe mora ny mikarakara.
Raha ny vahaolana loko, mba hijerena ny tsy ampy, dia mifidy akanjo izay mifanaraka amin'ny lokon'ny paozinao . Aza hadino ny fomba, izay tokony hanasongadina ny fahamendrehan'ilay sary ary, raha ilaina, hanafina ny fahadisoany. Ny akanjo dia azo zakaina amin'ny:
horonam-peo na horita;
kitapo lehibe sy kely;
Akanjo lava - akanjo sy ambony
Ny akanjo dia pensilihazo pensilihazo ary ny tendron'ny felam-boninkazo vita amin'ny lamba am-patana - inona no mety ho tsara kokoa? Lace, toy ny tsy misy fitaovana hafa, manome ny endriky ny vehivavy, ny firaisana ara-nofo ary ny famadihana. Ity duo ity no mpitarika ny sehatra maromaro. Ny mahaliana, ny mônika dia mijanona eo an-tampon'ny lamaody Olympus. Ny lohan-doko miafina misy tandroka manify no manintona ny faritra misy ny fehikibo. Io fametrahana io dia ampitomboina tanteraka amin'ny tendron'ny fohy. Ao amin'ny akanjon'ny vehivavy miaraka amin'ny akanjo, ny farany dia tsy afaka ny pensilihazo, fa mbola mahitsy, ny masoandro dia nipoitra ny tany na midi.
Ny setroka toy izany dia tsy hisy fiantraikany:
zazavavy kely mitandahatra modely;
Ny mpihazona ny tarehin'ny Pear dia tokony handefa ny endriky ny pensilihazo, izay manantitrantitra ny fihodinam-bokatr'ireo andilana, ary ny tampony miaraka amin'ny tendron-tsoratry ny soroka;
Voninkazo miaraka amin'ny fery tery dia tsara kokoa ny manakana ny safidinao amin'ny volonkoditra volobe-trapezium na ny masoandro, ary ny ambony dia tokony hifidy ny tena pritalenny.
Akanjo mifanaraka amin'ny akanjo
Ny akanjo miaraka amin'ny akanjo iray amin'io fomba io dia nanjary tia indrindra amin'ireo mpanohana ny akanjo am-pitiavana sy mahazatra. Ny akanjo teny an-dalambe no nanjary tia vehivavy an-tapitrisany. Tsy ho gaga ianao raha manao akanjo lava amin'ny kiraro na kofehy hoditra. Fanatanjahantena ara-panatanjahantena - mba ahafahanao manoritra ny sarimihetsika vehivavy eo amin'ny lampihazo miaraka amin'ny akanjon'i Marco de Vinchenzo sy DKNY. Izany indray dia manaporofo fa ny zavatra toy izany dia afaka mijery moramora, tsara tarehy ary lamaody.
Chanel Kostüm mit skirt
Ahoana ny tsy filazanao ny akanjom-behivavy malaza iray miaraka amin'ny akanjom-pirahalahiana izay natolotr'i Coco lehibe anay? Na inona na inona fironana, fomba, sns ..., ny trano ao Chanel dia mitoetra hatrany amin'ny foto-pitsipiny:
endri-pitenenana klasika, drafitra, darts;
Ny akanjo mivarina tsy misy rasklesheniya manasaraka tavy avo lenta.
Ny akanjom-behivavy misy satroboninahitra Chanel dia heverina ho fenitra mahavariana, fahamendrehana ary fomba. Ao anatin'izany, ny iray amintsika dia mijery voadio sy tsy misy diso. Ny endri-javatra miavaka amin'ny akanjo toy izany dia valva na poti-paty, voaravaka amin'ny loko mifanohitra. Ny halavan'ny lanjan'ny skirt dia eo ambanin'ny lohalika, misy ny modely lavalava ao amin'ny tany. Ny loko ny ankamaroan'i Gabriela dia heverina ho mainty sy fotsy. Nanapa-kevitra i Karl Lagerfeld fa hampiroborobo ny anjarany, hamolavola akanjo marevaka. Fikoranana tsotra miaraka amin'ny akanjo mofomamy - izany no mampiseho an'ity akanjo ity.
Ny akanjo vita amin'ny vehivavy amin'ny akanjony
Ny akanjo kiraro ho an'ny zazavavy, ny akanjom-bolo sy ny jirofo, izay noforonina avy amin'ny lamba mafana, dia natao mba hahatonga anao, ny hatsaran-tarehy, tsy mangatsiaka amin'ny fararano amin'ny lohataona sy ny ririnina mafana, fa sady mbola mijanona ho marefo ihany. Ao amin'ny fironana, ny endrika iray, ny tany am-boalohany, ny karazam-bolo isan-karazany sy ny endrika tsy maotona. Ny halavan'ny mini sy midi. Ny teboka dia mivaingana na misamboaravoara. Ny zavatra mampatahotra dia mitodika amin'ny skandinaviana manosika. Ny Stylists dia manoro azy ireo amin'ny kiraro, kiraro ankapobeny , kiraro monophonic sy kitapo, tsy misy volomparasy amin'ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny hodi-janakazo sy ny zavatra hafa.
Mitondra akanjo ho an'ny vehivavy
Ny akanjo misy ny vehivavy, ny akanjony sy ny palitao dia noforonina araka ny fironana lamaody farany indrindra, dia tsy vitan'ny hoe hanome ny toerany bebe kokoa kokoa, hanandratra ny fiheveran-tena, fa ho lasa antony hafa handeha amin'ny andro rehetra miaraka amin'ny tsiky mangidy eo amin'ny molony. Aza adino izao fa ao amin'ny lisitry ny fironana:
ny volom-borona rehetra;
akanjo miaraka amin'ny kofehy ;
novonoina taminà tonony mavokely;
noforonina miaraka amin'ny lamina noforonina;
floral, fanontana optical illusion;
lamba volomparasy, tsara indrindra ho an'ny sarin'ny hariva;
lamba, miloko volomparentsin'ny volon'ondry miloko volomparasy;
jacks miaraka amin'ny Basque Basque.
Ny kapaoty ho an'ny vehivavy sy ny akanjony
Akanjo akanjo sy top
Talohan'izay dia voalaza fa ny akanjo ambony sy ny akanjom-bolo amin'ny tandroka manjavozavo dia mendri-kaja. Tena manan-danja amin'ny karazana karazana toy izany:
a triangle triangle;
Raha ianao no tompon'ny habeny plus-size, dia aza misafidy ny tendron-tsoroka miaraka amin'ny tandroka ovaina. Hanasongadina ny andilany izy. Na izany aza dia tsy sarotra i Kim Kardashian. Azonao atao àry ny manamarina raha mendrika ny manao akanjo toy izany ianao na tsia. Ny setroka toy izany dia maneho hatrany hatrany. Azo atao amin'ny fankalazana izany, ary ny singa tsirairay ao aminy dia hamorona metaly tsara tarehy amin'ny singa hafa amin'ny garderobe.
Akanjo akanjo jirofo
Ny akanjom-boninahitra vita amin'ny akanjo lava sy ny palitao dia hita tao anatin'ny 80 taona. Tany am-piandohana dia tsy nisy afa-tsy ny daredevils sy ireo izay vonona ny hivoaka sy hanohy tsy tapaka ny fisehon'ireo manodidina azy. Ankehitriny, ny akanjon'ny vehivavy mitaingina akanjo sy jirom-boninahitra dia samy mitondra ny faharoa. Ny endriky ny ambany dia miovaova. Ny zavatra malaza indrindra dia avy amin'ny lamba malefaka sy loko amin'ny halavany. Tokony hodiovina amin'ny:
a jacket made of denim;
a jacket, jacket;
a waistcoat long;
miaraka amin'ny rojo matevina sy brasele kely.
Saron-damosina sy akanjo mena
Ny akanjo misy pensilin'ny pensilina sy ny kavina na ny akanjo kofehy dia ho lasa tonon-kiraro ho an'ny vehivavy, ny fahamendrehana ary ny fomba. Zava-dehibe ny tsy hanadino ny fomba hampifandraisana ireo zavatra roa ireo amin'ny fomba marina, mba hahitana ny fitondra-tena:
Ny farany ambany amin'ny tandroka manify dia tsara kokoa ny mifandray amin'ny volomparasy volom-borona (blues amin'ny endriky ny Carmen na ny firenena);
Ho an'ny masoandro, ny tampony dia tsy tokony ho feno hafetsen-javatra, raha tsy izany dia hohadinoina ny ampahany;
Ny mamorona ny akanjo hariva dia mampifandray ny kiraro amin'ny dantelina, satiny na fitaovana hafa mahavariana amin'ny akanjo marevaka vato, embroidery, guipure, paillettes.
Akanjo firapotsy sy akanjo
Ny akanjom-boninahitra sy ny akanjo dia lasa tia vehivavy tanora. Ity sary ity dia hifanaraka amin'ny fomba rehetra, manomboka amin'ny orinasa ary mifarana amin'ny Gothic. Isaky ny vanim-potoana eo amin'ny faritra dia ahitanao ny hatsaran-tarehy tsy hay hazavaina amin'ny famoronana marika malaza (DKNY, Kenzo), ahitana ireo singa ireo. Ankoatra izany, afaka mifangaro amin'ny zavatra hafa izy ireo. Tsy misy tongolobe mahaliana. Mametraka fomba toy izany ho an'ity sary ity, aza hadino ny fanoloran-kevitry ny stylist:
Ireo zazalahy misy soroka lehibe kokoa dia miezaka ny manandrana lava lava mitongilana miaraka amin'ny tery tery;
Fashionista miaraka amin'ny tendrony ambony mijery ny modely amin'ny kofehy mofomamy na pataloha;
Ny tandroka dia hanantitrantitra ny tendron-tsambo;
Mila mifantoka amin'ny tendany ve ianao? Mifidiana akanjo amin'ny oval na V-neck.
Ny akanjom-behivavy amin'ny akanjony dia tsy voatery ho loko matevina. Ankehitriny misy fiovàna be dia be, ahoana no fomba fananganana birao mahazendana. Ao anatin'io fironana io dia mbola misy silhouette matevina, akanjo lava matevina hatramin'ny lohalika, palety maivana, manga manify. Ny akanjo mandeha amin'ny fahavaratra dia azo zakaina miaraka amin'ny taratasy amam-bika. Tongasoa eto amin'ny lalao fifanandrinana, fohy jiro, poti slotted.
Akanjo mody miaraka amin'ny voninkazo floral
Mipetraha eo amin'ny tany miaraka amina tenda
Ny akanjo vita amin'ny fanjaitra mitongilana
Dresses avy amin'ny rongony - lamaody mahazatra ho an'ny zazavavy kanto
Miakanjo miaraka amin'ny satroka sy ny mofomamy
Sakafo ho an'i Kaisara miaraka amin'ny akoho - hevitra tsara indrindra amin'ny famenoana milina isan-karazany!
Fanampiana voalohany ho an'ny kofehy
"Clery" tranainy - fanoritsoritana ny karazana vary
Hevitra ho an'ny sary fampakarambady sary
Fluimucil ho an'ny atidoha
Nahoana no manonofy ny liona?
Lalao labozia ho an'ny ankizy
Ahoana no ahitanao ny taolana eo amin'ny tulle?
Ny hatsaran'ny ravin-tsoan'ny vehivavy
Hormones vehivavy: ny fitsipika
Ahoana no ahitanao tulle?